Izingubo zokugqoka ezinyakazayo zika-2015
Ngemuva kwehlobo lokubanda ebusika nephuzi elimnyama, ngifuna imfudumalo enkulu nembala ekhanyayo yehlobo. Futhi ihlobo ilanga, ulwandle nezimbali, izimbali, izimbali, ngakho akumangalisi ukuthi esimweni sasehlobo izinto ezivelele ezimbali zikhona kakade kule nkathi. Akuyona into ehlukile, nenkathi yehlobo ka-2015-ehlobo.
Singakwazi ukubona izindlela ezimbili eziyinhloko ezijwayelekile zemihlobiso yemifashane yemfashini: ubuqiniso obuncibilikisiwe bezimbali ezifanekisiwe kuze kufike emithanjeni, pistils kanye nemigqomo embali encane kunazo zonke kanye nesithombe esicacile se-flora ehlukahlukene. Ukuhlukahluka okunjalo kwezimhlobiso kwenza kube lula ukuwasebenzisa ezigqokeni zezitayela ezehlukene: imiqulu yemvelo ikulungele izingubo zesifazane, futhi imiqulu eqoshiwe yinto yobuhlanga noma yezemidlalo. Ubukhulu bokuphrinta kwezimbali bukuvumela ukuba ukhethe ingubo efanelana kakhulu nesibalo, kusukela ezimbali ezincane ze-mulffler yama-classic kuya emidwebo emikhulu kakhulu kangangokuba ungabona kuphela umhlobiso kusuka kude. Njengoba kungase kubonakale sengathi kukhona amaqhinga amakhulu, ama-prints amakhulu awanakulinganiswa kahle kuphela, kodwa futhi abuyele "abesifazane abancane" abancane. Ngenxa yobukhulu bezimbali, isithombe "silahlekile", ikakhulukazi uma singabonakali kakhulu. Kodwa iphethini ebudeni obuphakathi, futhi ngisho nasezindaweni "ezinenkinga", uyakwazi ukuheha ukunakwa okungadingekile kubo. Kodwa-ke, isisindo esingaphezu kwesisindo akusona isizathu sokwenqaba ngokweqile kusuka ezigqoke ezinjalo ezifashisayo, kudingekile ukuthi ukhethe isitayela nge-drapes noma ngezimbali ezihleliwe ezilinganiselwe usayizi omncane. Futhi, abesifazanekazi abakhule ngokugcwele bazovela ngezihlukahluka ezinobukhulu obuhlukene, ikakhulukazi uma izingcezu ezinkulu zingawi ezingxenyeni zomzimba ezihamba phambili. Izimbali ezincane noma izimbali ezincane ezihlakazekile - inguqulo yendawo yonke yephethini, efanelekayo noma yikuphi ukuma nokubunjwa.
Ama-prints ama-flower adinga ukusika okulula, ukuphelisa okuncane futhi "izinto ezihambisana naye" zezingubo zokuvimbela (izicathulo, imihlobiso). Kodwa-ke, njengoba wazi, yonke indawo kukhona okuhlukile, isibonelo, igqoke ngephethini elikhulu nezicathulo ezincane ezinjalo, kodwa emgqeni owodwa wombala kungase kube okukhethwa kukho okuthakazelisayo kunokuhlanganiswa okuyingqayizivele yokugqoka umbala nezicathulo zomzimba. Noma kunjalo, le nhlanganisela isengakhetha okungaqondakali futhi iyakwazi ukubonisa ukunambitheka okungenasici kwendlovukazi. Iphethini lembali libukeka ngokulinganayo kokubili kumigqoko eqondile noma ehlanganisiwe ye-laconic, futhi kumamodeli ngesitayela sama-50. Isiketi esikhombisa "umnsalo omusha" sivumela ukukhombisa ubuhle bezinto zokugqoka kanye nesinqe esiqinile somnikazi. Lesi sigqoko "sibuza" ukulungiswa kwekhanda eliqinile kanye nezikebhe ezindala zezikebhe. Uma ufuna ukuthenga lo mgqobo wesitayela kule hlobo, khumbula, "phezulu" kwayo kufanele ifanelane ngokuqinile kulo mfanekiso, kuphela kule ndaba isithombe sizobukeka siphelele. Izigqoko ezithandekayo ngaphezulu nge skirt eqondile noma encane. Ukuphrinta ama-flower kwenza kube besifazane abaningi.
Izinto ezibonakalayo zephrojekthi enjalo yilesilika, satin, chiffon noma ukotini omncane wohlobo lwe-marquis noma i-batista. Lezi zindwangu zigcizelela ubuhle bokuphrinta futhi zinikeze ukubukeka kwezemidlalo ezijabulisayo. Izindwangu nge-glitter zihlobisa i-cocktail noma ingubo yambusi, ne-chiffon noma ikotini izoba kuhle ntambama - ilula, i-hygroscopic futhi ilula ukuyihlanza.
Ihlobo liholide, ukuhamba, izindawo zokungcebeleka, olwandle nolwandle. Futhi olwandle cishe wonke ubulili obuhle bugqoke ama-sarafans amade agqamile, ngaphansi kwesiphepho esivela emilenzeni yabo. Akukho lutho olungcono kunengubo ede ebhishi ngezimbali! Into kuphela okufanele isatshwe ukuthi izimvemvane nezinyosi uzothola isembatho sakho umbhede wembali. Ungagcwalisa isitifiketi ngezicathulo ezilula esitokisini esinezintambo kanye nesikhwama esinezinhlamvu ezibanzi.
Izingubo ezihlotshiswe ngembali eyodwa noma izimbali ezilodwa zizofanele kuleli hlobo. Umdwebo onjalo unhle kakhulu emlandweni omnyama noma ogcweleyo, unikeza inothi elingasempumalanga eceleni.
Izigqoko ziyakwazi ukuguqula noma yiliphi owesifazane ukuba libe ubuhle, futhi zigqoke ngokubhala okuhlobisa ngeke zigcizelele ubuhle bomuntu ophethe umkhosi, kodwa ukunambitheka kwakhe okungenasici nolwazi lwezindlela eziyinhloko zonyaka ka-spring-ehlobo.
Izingubo ezintathu ezingenapumelelo zezinkampani: musa ukuzigqoka!
Yini efashisayo ekwindla-ebusika 2016-2017 yabasha
I-Fashion for Pregnant Spring-Summer 2014
Ukukhetha izingubo zangaphandle entwasahlobo
Iziqhumane zegolide: isimo se-New Year's Eve-2016
Isinkwa sasekhaya esisheshayo
Ingulube enezithelo kanye nokugcwalisa iberry
Yini okudingeka ukwazi mayelana nokukhuluphala?
Iplanethi yaseTokyo - idolobha lokushintsha njalo
Ukuhlanzeka nokuhlanzeka, ungazizwa!
Ama-biscuits e-cheese ne-basil
Ungabhalisa kanjani i-ICQ efonini yakho?
I-spathiphyllum - isitshalo sezindlu